» “बलिउडकी निकै लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कर कति बर्षमा लागिन ? बिहेपछि उनको यो पहिलो जन्मदिन आफ्नो पति संग यसरी मनाईन (तस्बिर सहित) “बलिउडकी निकै लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कर कति बर्षमा लागिन ? बिहेपछि उनको यो पहिलो जन्मदिन आफ्नो पति संग यसरी मनाईन (तस्बिर सहित) – हाम्रो खबर
“बलिउडकी निकै लोकप्रिय गायिका नेहा कक्कर कति बर्षमा लागिन ? बिहेपछि उनको यो पहिलो जन्मदिन आफ्नो पति संग यसरी मनाईन (तस्बिर सहित)
“काठमाडौं : बलिउडकी निकै लोकप्रिय गायिकाको रुपमा चिनिने गायिका हुन् नेहा कक्कर। सुमधुर आवाजसंगै सुन्दरताले भरिपूर्ण नेहाको आवाजलाई रुचाउने करोडौं दर्शक स्रोता छन् । स्वरकी रानीको उपनामले पनि चिनिने नेहाको आज जन्मदिन परेको छ।”
“विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनको यो पहिलो जन्मदिन हो। जन्मदिनको अवसरमा नेहालाई सामाजिक संजाल फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटक लगायतका माध्यमहरुमा शुभकामना दिनेहरुको ओइरो लागेको छ। करोडौं फ्यान फ्लोअर्स कमाएकी नेहाले आफ्ना पतिसंग यसपटकको जन्मदिन मनाएकी हुन् ।”
“विवाहपछिको पहिलो जन्मदिन भएकोले निकै उत्साहित र खुशी भइ श्रीमानसंग जन्मदिन मनाउन पाउँदा आफू निकै खुसी भएको नेहाले जनाएकी छिन् । उनले पतिसंग आफ्नो जन्मदिन मनाएका तस्वीरहरु फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै शुभकामना दिने सम्पुर्णलाई धन्यवाद समेत दिएकी छिन् । हेरौं नेहाले पतिसंग मनाएका जन्मदिनका तस्वीरहरु :-“